Music - Myanmar Asian TV
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Army လေးတွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်နော် … Idol တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ရတယ်ဆိုတာ တကယ်တော် မလွယ်ကူပါဘူး … ရပ်တည်ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ နာမည်တစ်ခုရဖို့ ဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာ ကိုယ်တွေ မတွေးတောနိုင်လောက်တဲ့အထိခက်ခဲပါတယ် … Burn The Stage က BTS တို့ 2017 ခုနှစ် tour တုန်းက သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ,…
ဒီတစ်ခါတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးAnimationကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ IMDB 5.9 ရထားတဲ့ musical,fantasy,comedy အမျိုးအစားလေးပါ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Demi Lovato,Avril Lavigne,Sia,Ashley Tisdaleစတဲ့နာမည်ကြီးတွေချည်းဖြစ်တဲ့အပြင် musical ကားလေးလည်းဖြစ်တော့ အသံကောင်းကောင်းနဲ့သီဆိုထားတဲ့သီချင်းတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဖိလစ်ပီချားမ်မင်း ဆိုတဲ့မင်းသားတစ်ပါးက ကျိန်စာသင့်နေတဲ့အတွက်အရမ်းကိုနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီဆွဲဆောင်မှုရှိတော့ သူနဲ့မျက်လုံးချင်ဆုံမိတဲ့မိန်းကလေးမှန်သမျှက သူ့ကိုစွဲလန်းပြီးချစ်ခင်ကြတယ် (အဲ့လိုကျိန်စာမျိုးကိုယ်တွေလည်းမိချင်လိုက်တာ ??) သူ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရောက်ရင် အဲ့ကျိန်စာကထာဝရပိတ်မိသွားပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကွယ်ပျောက်ပြီးလူတွေရဲ့စိတ်မှာအမှောင်အတိဖုံးသွားမှာဖြစ်တယ် ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာ အချစ်စစ်ရဲ့အနမ်းကို…
Anonymous Noise ( 2017 )
Anonymous Noise (Fukumenkei Noizu)လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ကားလေးကတော့ manga နဲ့ anime ကနေ live-action အနေနဲ့ ပြန် ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ.. ဇာတ်လမ်းကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့romance အမျိုးအစားလေးပါပဲ.. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့….. မိုမိုမှာ နီနိုဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းမလေး ရှိခဲ့တယ်.. နောက်တော့ကံတရားကြောင့် မိုမိုက အဝေးထွက်သွားရတဲ့အချိန်မှာ နီနိုကိုစကားလေးတစ်ခွန်း ပြောခဲ့တယ် “မင်းအသံကြားရာကိုငါလာရှာပြီး ပြန်စုံဆည်းမယ်တဲ့” အဲ့စကားလေးကြောင့်ပဲ နီနိုက…
ဂျပန်ဇာတ်ကားကို ကြည့်လေ့ကြည့်ထရှိတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒီဇာက်ကား နာမည်လေးက ရင်းနှီးနေမှာပါ … ဟုတ်ပါတယ် အခုနှစ်ထဲမှာပဲ နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များနေကြတဲ့ မင်းသားချောလေး Yamazaki Kento နဲ့ မင်းသမီးချောလေး Hirose Suzu တို့ Anime ကို Live Action အဖြစ် ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ –…
Zombies ( 2018 )
တက္ကသိုလ်တော်တော်များက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ဒီနေ့ စာမေးပွဲပြီးတာဆိုတော့က … Exam ပြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အေးဆေးလွင့်လို့ရအောင် 2018 ခုနှစ်မှာ Disney ကနေ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Zombies လို့ အမည်ရတဲ့ Romance , School , Musical & Dance ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် …. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ –…